Ezi zi-10 zezona zintle zemidlalo yeFreddie Mercury esoloko imnandi | Iindaba zeGajethi
Le yimidlalo elishumi elungileyo kaFreddie Mercury osoloko emkhulu
IiVillamandos | | ngokubanzi
Nge-24 kaNovemba, kwakuyiminyaka engama-25 ukusweleka kwelinye lamabali omculo, uninzi lwethu olonwabisayo mihla le. Sithetha malunga nendlela owawusele ucinga ngayo uFreddie Mercury, owayelilungu leqela elidumileyo ukumkanikazi.
Kule veki bekubhiyozelwa uLwesihlanu oMnyama, sithethile kwade kwadinwa itekhnoloji yiyo loo nto ndigqibe kwelokuba ndiyiphelise le veki, kunye neyakho ngombulelo omncinci kwiMercury, ndikubonise I-10 yeyona midlalo mihle yeFreddie Mercury esoloko imnandi, nangona ewe, besele sikulumkisile ukuba ndingathanda ukwenza eli nqaku lingenasiphelo kwaye ndikubonise imiboniso eli-1.000 XNUMX, kodwa akunakuba njalo.
1 I-Barcelona (1988)
2 Ndifuna Ukhululeka (1984)
3 Phila ngokuNceda ngokuPhila (1985)
4 Ngaphantsi koxinzelelo (1981)
5 I-Bohemian Rhapsody (ngo-1986)
6 Siza kukuDwala (1981)
7 Umntu Othanda (1981)
8 SingaMajoni (1986)
9 Ukumkanikazi obulalayo (1974)
10 Umboniso kufuneka uqhubeke (1991)
Los Imidlalo yeOlimpiki yaseBarcelona Zithathwa njengenye yezona zibalaseleyo embalini, nangona bebenendawo enkulu yokungabikho kukaFreddie Mercury owasweleka kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye owayephethe ukutolika umhobe wesona siganeko sibalulekileyo kwezemidlalo emhlabeni.
Nangona kunjalo intsomi yayikho kakhulu njengoko ubona kwividiyo apho avele khona noMontserrat Caballé esenza enye yeengoma zeOlimpiki ezithandekayo kwimbali.
Ndifuna Ukhululeka (1984)
IMercury ayibanga lelinye lawona mazwi amnandi kwimbali, kodwa ubuye abe yinkosi yokwenyani yokusebenza. Umzekelo ocacileyo yile kliphu yevidiyo apho adlala khona umfazi kwiparodi ye-opera yaseBritane eyaziwayo.
Namhlanje le nto ayizukutsala umdla wethu kwaphela, kodwa okwelo xesha yayiyeyona nto ibalulekileyo. Umzekelo EUnited States, iklip yevidiyo yacitshwa de kwangowe-1991 xa yayiqala ukusasazwa ngokukhululekileyo.
Phila ngokuNceda ngokuPhila (1985)
Sekuyiminyaka engama-25 okoko uFreddie Mercury wasishiya naphakade kwaye ibiyiminyaka engama-31 eyadlulayo eyayibanjelwe eWembley, ibala lemidlalo eliyintsomi, kungekuphela ngenxa yemidlalo yebhola ekhatywayo eyayibanjelwe, kodwa nangenxa yenani elikhulu Ikonsathi eziye zabanjwa Uncedo oluPhila, yeyona konsathi intle kwimbali edibanise amaqela amaninzi ukuze kupheliswe indlala e-Ethiopia.
Onke amaqela ayenemizuzu eli-18 eqongeni, eshiya kuphela isicatshulwa esacwangcisiweyo Ukumkanikazi owayedlala kwaye eshukumisa wonke umntu owayekhona kangangemizuzu engama-20. Namhlanje, uninzi lusefumana iinwele zabo emacaleni xa sibuya ukonwabela uNcedo lwaNgoku.
Ngaphantsi koxinzelelo (1981)
Phantsi kwefuthe yenye yeengoma eziyintsomi zikaKumkanikazi, enkosi kwinxalenye yokuthatha inxaxheba kuyo UDavid Bowie. Kunye nomculi owaziwayo yayiyenye yemixholo emikhulu yealbham "Indawo eshushu" eyapapashwa ngo-1982.
Ngesi sihlandlo, kwaye njengoko ubona kwividiyo yokuvula, sinokubona iMercury idlala ingoma noRoger Taylor, obetha uQueen owenza ukuba singaphoswa nguBuyie, ubuncinci ngokwelizwi lakhe oko kuthetha.
I-Bohemian Rhapsody (ngo-1986)
UKumkanikazi uye ezantsi kwimbali ngenani elikhulu leengoma, esiziculileyo kwaye sangqungqa ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Nangona kunjalo I-Bohemian Rhapsody yeyona ngoma idumileyo yeqela laseBritane, eye yangena embalini njengomhobe kubantu abaninzi.
Enye yezona nguqulelo zibalaseleyo zalo mxholo yile sikunika yona namhlanje kwaye yenzeka kwakhona eWembley, nangona ngeli xesha ngo-1986.Yenye yeevidiyo ezijongwa kakhulu kwi-Intanethi kwaye ayimangalisi ngaphandle kwamathandabuzo.
Siza kukuDwala (1981)
Akunyanzelekanga ukuba ube ngumlandeli kaKumkanikazi ukuze uve kwaye ungcangcazele ngamanye amaxesha ngenye yeengoma zabo ezaziwayo ezifana We Wil Rock Wena apho iMercury yenza ukusebenza ngokugqwesileyo apho ikwazi ukufikelela nakubani na.
Betha umdlalo wevidiyo kunye lungela ukungcangcazela kwaye ukonwabele enye yeengoma ezintle zikaKumkanikazi.
Umntu Othanda (1981)
Iingoma zokumkanikazi zeengoma azipheli, kodwa iyabonakala Umntu ozokuthanda, Enye yezo ngoma ingezizo ezona zaziwayo, kodwa kuninzi lolunye lweentandokazi zethu.
Yenziwe eMontreal nguFreddie Mercury, kwisixeko saseCanada wanika isifundo malunga nokuba umzobi kufuneka abe njani eqongeni. Bambalwa amagcisa anokufikelela kwinqanaba leMercury, ngelizwi lakhe elimangalisayo, exhaswa liqela elingaqhelekanga kwaye ekugqibeleni uyazi indlela yokunxibelelana nabo bonke abakhoyo.
Kuwo nawuphi na umcimbi wezemidlalo oxabisa ityuwa yawo, nokuba siyayithanda okanye ayithandi, siya kuyiva i Singamaqhawe ngoKumkanikazi eliye laba ngumhobe wesintu ngokusondeleyo kwezemidlalo.
Saphinda saya eWembley ukuya kubona olona toliko lubalaseleyo lwenziwe ngengoma kwaye apho sibona khona iMercury inxibe njengoKumkani wezinto ezininzi kwaye kunjalo neliLitye.
Ukumkanikazi obulalayo (1974)
Mtshakazi o bulala Yenye yeengoma zokuqala uKumkanikazi aphumelele ngazo uloyiso. Inxalenye yealbhamu yabo yesithathu ye studio kwaye bayenza bukhoma, isinika ezinye zeekwayala ezintle kwimbali yonke yeqela.
Vula iindlebe zakho ngokubanzi kwaye ulungele ukonwabela enye yeengoma ezintle kunye nenye yeendlela ezilungileyo zikaFreddie Mercury.
Umboniso kufuneka uqhubeke (1991)
Ukuvala olu luhlu asinakulibala enye yeengoma ezaziwayo zeNdlovukazi njengoko injalo Umboniso makaqhubeke Kwaye nangona kungenjalo ukuba intsebenzo inebali elihle ngasemva kwayo. Kwaye ukuba lo mbandela wawungomnye wemisebenzi yokugqibela yeMercury, esele igula kakhulu kwaye ichaphazelekayo yi-AIDS.
Ingoma ngumyalezo omkhulu wethemba ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni kunye noFreddie ngokwakhe awukhuselayo ngendlela engumzekelo. Ngexesha lokuyitolika, uBrian May owaziwayo wacinga ukuba akanakutolika, apho ingqondi yaseBritane yaphendula ngokusela isiselo eside sevodka; "Ewe ndizakwenza njalo, sithandwa".
Yeyiphi eyona ngoma imnandi kaKumkanikazi kunye nokusebenza kweyona nto iphambili kuFreddie Mercury?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Le yimidlalo elishumi elungileyo kaFreddie Mercury osoloko emkhulu
Ifowuni engaphezulu inokufaka i-Snapdragon 835
Iprojekthi NEON yiyo Windows 10 uhlaziyo oluya kuphucula ujongano lomsebenzisi